Slim Bonde Maiden Light Tan Skin WM 142CM TPE Mmekọahụ Doll Ava
Nwa bebi TPE,Nnukwu ara mmekọahụ mmekọahụ,Ebughibu na umu nwanyi
Save 51%$ 1,308.99$ 2,658.99
Arụ ọrụ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, m goro a na-ekpo ọkụ odibo. Okoneyo usen kiet ke mma n̄kokpụhọ utom, enye ama okot mi ufọk. Anyị abụọ gotụbigara mmanya anya ma bido ghọgbuo mmadụ. Ewepụrụ m uwe elu ya na bra wee malite ịmịbara ara ya ka ọ na-amịpụta m amụ ma na-apị ya.
Anyị gba ọtọ, m kpudo ya na sofa wee jiri dick m na-egwu ya. N'ikpeazụ, ọ tiri mkpu: "Pụba m!" Ya mere, emere m ya, wee mebie dị ka onye nzuzu ruo mgbe m banyere n'ime ọtụ ọkụ ya na mmiri ya. Ọ na-eme mkpesa ma na-eti mkpu. Ọ gwara m na ọ bụ mmekọahụ kacha mma ọ nwetụrụla, ma anyị ka na-echekwa oge.
Elu ： 55.9inches (142cm)
Ibu ibu ： 57.3 lbs (28.5kg)
Bust ： 26 sentimita (83.5cm)
N'úkwù ： 19 sentimita (39.5cm)
N'úkwù ： 30 sentimita (75.5cm)
Ogwe aka: 7 sentimita (18cm)
Ogwe aka: 23 sentimita （58.5cm）
Lengthkwụ ogologo: 7.8 sentimita （20cm）